सर्वश्रेष्ठ तीन कार्ड पोकर वास्तविक पैसा क्यासिनो अनलाइन - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » तीन कार्ड पोकर
जब तपाईं वास्तविक पैसाको साथ तीन कार्ड पोकर खेल्नुहुन्छ
तीन कार्ड पोकर के हो?
तीन कार्ड पोकरको आधारभूत नियमहरू
तीन कार्ड पोकरको आधारभूत रणनीति
तीन कार्ड पोकरको ईतिहास
तीन कार्ड पोकर खेल्नुहोस्
जब यो जुवा खेल्न आउँछ, प्रत्येक खेलाडीको आफ्नै रणनीति र पोकर अनुहार हुन्छ। जे होस्, सबैलाई निम्न नियमहरूको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ कि यो सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार गेमप्ले समर्थन गरिएको छ: ओभरपेन्ड नगर्नुहोस्, निर्णय लिनुहोस् कि तपाइँ तपाइँको जीतसँग पहिले के गर्न चाहानुहुन्छ, र असक्षम भएमा कहिले खेल्नुहुन्न।
बजेट बनाउनु कार्यको एक समझदार कोर्स हो जब वास्तविक पैसाको साथ जुवा खेल्दै। जितना महत्वपूर्ण एक जीत लक्ष्य स्थापना छ। जब एक खेलाडीले एक विजेता पुरस्कारमा आफ्नो ठाँउ सेट गर्दछ, यो समझदारी खर्चको लागि राम्रोसँग बोड हुन्छ। अन्तमा, रक्सी पिएर जूवा खेल्ने सल्लाह दिइन्छ। मद्यपानले इन्द्रियहरूलाई नै बिगार्दैन, तर यसले नराम्रो निर्णय गर्न पनि प्रोत्साहित गर्दछ।
रमाईलो, छिटो र सिक्न सजिलो, तीन-कार्ड पोकर जुवाको सब भन्दा चल्ने खेलहरू मध्ये एक भएको छ। स्थानीय क्यासिनो र अनलाइनमा, पन्टरहरू उनीहरूको झोलामा टेबुलमा पुग्दैछन्। अब प्रत्यक्ष विकल्पको साथ, खेलाडीहरूले उनीहरूको घरको आरामबाट प्रामाणिक सेटि inमा डिलरलाई चुनौती दिन सक्छन्।
नामले देखाउँदछ, खेलको लक्ष्य केवल तीन कार्डको साथ उत्तम पोकर हातलाई सम्भव बनाउनु हो। परम्परागत पोकर भिन्नतालाई मोड्दै, bettor डिलरको बिरूद्ध मात्र खेल्छ। यसको साधारण सेटअपको साथ, खेल दुबै आगाडिहरू र जटिल रणनीतिहरूसहित मौसमी खेलाडीहरूले आनन्द लिन सक्दछन्।
खेल्न तयार हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा। सुरु गर्नको लागि, डिलरले आफैलाई समावेश गर्दै सबैलाई तीन कार्ड दिन अघि प्लेयरले एन्ट बनाउँदछ। अर्को, निर्णय हुन्छ कि फोल्ड गर्ने वा बढाउने हो। डिलरले त्यसपछि आफ्नो कार्डहरू प्रकट गर्दछ र योग्य हुन उच्च रानी उच्च उत्पादन गर्नुपर्दछ।
यदि योग्य छ भने, हातहरू तुलना गरिएको छ र सबै भन्दा राम्रो संयोजन जीत। यो सजिलो छ। थ्री कार्ड पोकरको बारेमा एक महान कुरा यो हो कि तपाईं थप भुक्तानीको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ डिलरले तपाईंको हात पिट्दछ भने पनि, उदाहरणका लागि, तपाईं एक ante बोनस प्राप्त हुनेछ यदि तपाईं एक सीधा वा अधिक उपहार हो भने।
जबकि यो द्रुत-गति पुस्तक सहजै novices द्वारा खेल्न सकिन्छ, पोकर को सबै रूप मा आवश्यक कौशल स्तर यो अधिक उन्नत रणनीतिहरु को लागी खुला बनाउँछ। शुरुआतीहरूको लागि, पहिले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं दुबै एन्टे र जोडी प्लस बेट्ससँग परिचित हुनुहुन्छ, किनकि प्रत्येक भेरिएन्टलाई यसको आफ्नै अनौंठो दृष्टिकोण चाहिन्छ।
औंठाको सामान्य नियम प्ले गर्न को छ यदि तपाईंसँग एक जोडी छ, तीन प्रकारको, एक सीधा वा फ्लश। असफल भएमा, तपाईं पनि जारी राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं एक रानी, 6, or वा त्यो भन्दा राम्रो, एक संयोजन जो सांख्यिकीय रूपमा लगातार तीन-कार्ड पोकर जित्ने उत्तम अवसर प्रदान गर्न को लागी साबित भएको छ।
शताब्दीयौंको लागि विभिन्न रूप मा खेलेको छ, पोकर पुनर्वास को मास्टर हो। थ्री कार्ड शैली दृश्यको लागि सापेक्ष रूपमा नयाँ आगमनकर्ता हो जुन ब्राजको क्लासिक ब्रिटिश खेलबाट लिइएको हो भनेर सोच्दछ। पोकर ऐस डेरेक वेब को हालको संस्करण लास भेगासको मध्य 90 ० को दशकमा परिचय दिएका छन्।
धेरै लोकप्रिय टेबल खेलहरू जस्तै, थ्री कार्ड पोकर अनलाइन क्यासिनोहरूको विस्फोटको साथ जनतामा खुला गरियो। त्यस पछिदेखि, खेल फस्टायो र विकसित भएको छ, फ्ल्यास थ्री-कार्ड पोकर र सिक्स-कार्ड बोनस जस्ता उत्साहवर्धक भिन्नताहरू पैदा गर्दै, यी सबैको विभिन्न प्लेटफर्महरूमा लाइभ मजा लिन सकिन्छ।
टेबुलमा पुग्नु अझ सजिलो अनलाईन पनि हो किनभने पन्टर्ससँग तिनीहरूको बेवास्तामा साइट शर्तहरूको अनन्त विकल्प हुन्छ। एक स्टूडियो वा क्यासिनोबाट प्रवाहित वास्तविक जीवन डीलरको बिरूद्ध लाइभ थ्री-कार्ड पोकर खेल्दा- उत्साहको एक अतिरिक्त तत्व थप गर्दछ जुन अनलाइन गेमि theलाई उच्च स्तरमा पुulted्याएको छ।